Inuu Guusha Jecelyahay, Halista Di Maria & Shirka Jaraa’id Ee Ramos Ka Hor Kulanka PSG Ee CL %
Kabtanka kooxda kubada cagta Real Madrid, ee Sergio Ramos, ayaa wuxuu uwaramay warbaahinta ka hor ciyaarta ay la balansan yihiin dhigooda PSG, taasoo ka tirsan lugta labaad ee wareega 16-ka Champions League.
Ramos, ayaa wuxuu uga hadlay shirkiisa jaraa’id wax yaabo badan, oo ay kamid tahay, maqnaanshaha Neymar, soo laabashada Marcelo, rajadooda kulanka iyo sidoo kale halista ay kala kulmi karaan Angel Fabio Di Maria.
Hadaba, waxaan halkaan hoose ayaan idin kugu soo gudbin doonaa shirka Jaraa’id ee Daafacaan dhexe ee Real Madrid, islamarkaana udhashay wadanka Spain, waliba isagoo dhameystiran, ee ka bogasho wacan saaxiibayaal.
“Waxaan sameyn doonaa, wixii aan mar walba samey jirnay, waxaana isku deyi doonaa inaan joogteeno, waxaan isku deyi doonan inaan sameyno wixii aan gurigeena kusoo sameynay, waan xishmeynayaa Paris, laakiin waxaan ku kalsoonahay awoodeeda,” ayuu ku bilaabay.
“Waan ku farax-sanahay in Marcelo uu mar kale diyaar noo noqdo, wuxuu nasiinayaa daafacasho badan, laakiin sidoo kale, weerarka ayuu ka qeyb-qaataa.
“Neymar, waa nooca ciyaaryahan ee isbedal sameysa, maqnaanshihiisa waxay dhaawici kartaa koox walba, laakiin waa inaan utaxadirnaa sidii hore, laga yaabaa Angel Di Maria, kaaoo iyaga siin kara wax badan, wuxuu go’aamin karaa ciyaarta ka si badan Neymar, wadooda fiican ayuu siinayaa.
“Waa inaan ku dhameysanayaa kulanka wadadeena ugu fiican sida ugu macquulsan – Ciyaartoyda fiican, kulankaan kale iyo kan Beri waxay utahay fursad, waana muujin doonaa waxa aan nahay.
“Qof walba waa inuu qaataa doorkiisa Berri, Ka kabtan ahaan, kulamadaan oo kale, waa jeclahay, waxaana isku daba ridi doonaa daafaca iyo qeybaha kale ee ciyaarta, waana jecelhay inaan dheelo kulamadaan oo kale.
“Marnaba kama daalo guusha, waan jeclahay guusha, waqti xaadirkaan ma ahan markii aniga cadaadiska ley saari lahaa, dhibcaha ayaa dhiiro-gelin dheeri ah nasiinaya, waxaa huba in taasi ay run tahay aniga iyo saaxiibadey,” ayuu hadalkiisa kusoo gaba gabeeyay.
Champions LeaguePSG v Real MadridRamos